Tababar loo qabtay shaqaalaha xarumaha xakameynta qaaxada. | Puntland Ministry of Health
Tababar loo qabtay shaqaalaha xarumaha xakameynta qaaxada.
Waxaa shir laba maalmood socdey ku soo dhammaaday hoolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka Dowlad Gobeleedka Puntland. Tababkani wuxuu ku saabsanaa habka loo maamulo daawaada qaaxada. Waxaa shirka ka soo qayb galay 12ka xarumood ee xakamaynta qaaxada ee dowlada Puntland iyo xarunta qaaxada ee Caabudwaaq oo ay wasaaraddu ka kaalmayso Tababarida shaqaalaha iyo Daawada.
Waxaa ugu horeyn shirka furay maareeyaha mashruuca xakameynta qaaxada Dr.Cali Xasan Ow cisman, wuxuuna kula daardaamay shaqaalaha xarumaha qaaxada in ay ka faa’ideystaan tababarkan, una gudbiyaan waxay barteen bulshada kale ee ku nool deegaanada ay ka yimaadeen.
Qaar ka mid ah shaqaalihii tababarka kasoo qayb galay oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ay ka faaideysteen tababarkan, ayna ka go’antahay inay gudbiyaan aqoonta iyo khibrada ay ka heleen tababrkan socday mudada labada cisho.
Tababarkan oo ay iska kaashadeen Wasaaradda caafimaadka iyo Hay’adda caafimadka aduunka ee WHO qaybta Puntland.
Ugu danbayntii, shirkaan waxa soo gabagabeeyey u qabsanaha wacyigelinta qaaxada ee Wasaaradda caafimadka, cabdicasiis Muuse Aadan.